Munaasabad lagu dhisay qoysas dadka baahiyaha gaarka qaba oo Mogadishu lagu qabtay… – Hagaag.com
Posted on 24 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxaa magaalada Mogadishu lagu qabtay Munaasabad guur wadareed ah oo loo sameeyey dadka qaba baahiyaha gaarka ah, waxaana munaasabada soo abaabulay urur dhinaca bulshada rayidka ah oo bilaabay dadaalo lacag kaalmo loogu ururiyey si loogu hirgeliyo mashruucan iyo mashaariic kale oo lagu dhisayo qoysaska.
Guur wadareedkan waa kii ugu horeeyey noociisa oo ka dhaca Somalia, waxaana la isu guuriyey shan qoys oo qaarkoodu qaba baahiyaha gaarka ah, waxay u dabaaldegeen bilowga nolosha guurkooda, waxaana xaflada soo abaabulay Ururka Guryo Samo oo arrimaha qoyska ka shaqeysa.
Ururka ayaa wuxuu bilaabay olole tabarucaad lagu ururinayo oo loogu talogalay qeybtan dadka noocaan ah, talaabooyinka ugu horeeya oo ay qaaday ayaa aheyd in kharashka guurka iyo mashruuc yar oo noloshooda ku dabirtaan ay u fuliyaan, mas’uuliyiinta ururkan ayaa rajeynaya inay ballaariyaan oo ay ku daraan qeybo kale oo badan.
Munaasabadda ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiir ku xigeenka Awqaafta Soomaaliya, wuxuuna muujiyay in fiiro gaar ah dowlada siineyso dadka baahiyaha gaarka qaba.
Dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee Soomaaliya jooga waxay ka cawdaan adeegyada hooseeya ee la siiyo, waxayna la il daran yihiin fikradaha khaldan ee laga aaminsan yahay, taas oo adkaynaysa inay dhex galaan bulshada.